» हेटौंडामा पनि देखिए कोरोनाका लक्षण भएका बिरामी, ‘चिकित्सक नै असुरक्षित’
हेटौंडामा पनि देखिए कोरोनाका लक्षण भएका बिरामी, ‘चिकित्सक नै असुरक्षित’
१० चैत्र २०७६, सोमबार ०७:५२
मकवानपुर । हेटौंडास्थित सरकारी, निजी तथा सहकारी अस्पतालमा सुरक्षित सामग्री उपलब्ध नहुँदा कोरोनाको शंका भएका बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिन कठिनाइ हुने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोनाका लक्षण भएका बिरामी हेटौंडामा पनि देखा परेका छन् ।
त्यस्ता, बिरामीसँग चिकित्सक नै असुरक्षित हुने गरेका छन् । हेटौंडा अस्पतालमा आइतबार भएको चिकित्सकहरुको संयुक्त बैठकमा एन ९५ मास्क र व्यक्ति सुरक्षित सामग्री (पीपीई) समेत नभएको भन्दै चिकित्सकले गुनासो पोखेका थिए । हेटौंडामा २ जनामा उच्च ज्वरो र श्वासप्रश्वास समस्या भएका बिरामी देखेपछि चिकित्सक नै असुरक्षित भएको महसुस गरेका हुन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
कोरोना भाइरसको लक्षण भएका यी दुई व्यक्तिलाई भरतपुर पठाइएको थियो । बिरामीमध्ये एकजना दुबईबाट आएका र अर्का भारतबाट आएका थिए । त्यतिबेला चिकित्सकले पीपीईको महसुस गरेका थिए । आफू सुरक्षित भएर त्यस्ता बिरामीको जाँच गर्नुपर्ने डा. कमल दवाडीले बताए ।
हेटौंडाका अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमित भेटिनुभन्दा पहिला नै तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् । हेटौंडाका निजी, सरकारी र सहकारी अस्पतालहरुमा सुरक्षाका सामाग्री छैनन् । फ्रन्टलाइनमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकरु आफैं असुरक्षित रहेको अवस्थामा कसरी उपचारमा संलग्न हुने , डा. सागर काफ्लेले भने, ‘कम्तीमा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार गर्ने क्रममा सुरक्षित रहने पोसाक र उपकरण तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्यो ।